Nyowani Captcha anti Spam system yeDesdeLinux | Kubva kuLinux
Kwaziso kune vese blog blog.
Kunyangwe kwauri zvandiri kuzotaura pamusoro pazvo zviri pachena (isu tine plugin inonzi Akismet ndiani anozvitarisira), zvakanaka kuti vazive kuti tiri kugamuchira huwandu husingawanzo hweSSPAM mune zvinyorwa zveblog.
Ndokusaka ini ndakamisa plugin CAPTCHA, iyo iwe yaunogona kuona mune zvakataurwa uye fomu rekunyoresa (kana vasina kunyoreswa vashandisi), seinotevera:
Chinhu chinonakidza nezve iyi plugin ndechekuti ichatibatsira kushandisa huropi hwedu, nekuti isu tinofanirwa kugadzirisa yakakosha account yemasvomhu 😀
Ndokumbirawo, tinoda kuti utiudze kana uine dambudziko nazvo. Kana ukasazviona (ndinodzokorora, chete vasina kunyoreswa vashandisi), ndapota edza kuzorodza browser yako cache.
Ndine urombo kana izvi zvichikonzera kusagadzikana. Kubva ikozvino zvichienda mberi tichave tichiongorora kana iyo plugin ichinyatso kubatsira kudzikisa huwandu hweSPAM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » KubvaLinux » Nyowani Captcha anti Spam system yeDesdeLinux
Izvo hazvimiriri chero dambudziko kwandiri kuti ndiite sekukumbira kwako.
Hapana matambudziko 😀
Wuilmer bolivar akadaro
Ndeipi nhamba yakawedzeredzwa ne7 inondipa 21.? O___O
Ini ndinofunga yakawanda masvomhu kwandiri 🙁
Kuedza mhinduro sisitimu ...
Wadii kusanamatira chirevo chimwe chinhu senge.?
Pindura Wuilmer Bolivar
Zvakanaka .. Hahaha, chinangwa ndechekudzidzira masvomhu, kana tikabatanidza iwo mufananidzo zvakafanana nekuva nembudzi Hahahaha ...
Handizive nhamba yakawedzera ne3 inopa 3 hahahaha ..
Kana izvi zvakaoma, ndinotenda izvo3 3s 3mmm ...
2709 × 7 = 21 kana zvisiri m3 3 zvisizvo
oh uye ini ndakanganwa kuti kana iwe ukashandisa imwechete password kune zvese, VaElav naVaKzkg ^ gaara vanoziva yako Twitter / Facebook / G + password
Ngatione, zvinoshanda kujekesa kuti dziviriro iyi, iyo Captcha ichangoratidzwa iwe kana usiri mushandisi akanyoreswa muhurongwa, kana iwe ukanyoresa kuburikidza https://blog.desdelinux.net/wp-admin/ uye iwe unopinda mukati, saka haungade iyo captcha, handiti?
Ndokusaka ini ndakamisa Captcha plugin, iyo yaunogona kuona mune zvakataurwa uye fomu rekunyoresa (kana vasina kunyoreswa vashandisi), seinotevera:
Ndozvandaida kutaura, Captain Obvious. Kunyangwe, kune avo vakaita seni vasingapinde zvakawanda muPC izvo zvisiri, zvakapusa, iyo captcha haitikanganisa isu zvachose (zvirevo zvandinoita zvinogara zvichibuda mune jiffy).
Kuchena kupfuura mvura zvisingaite hahahahaha
Ndokusaka ini ndamisa iyo Captcha plugin, iyo iwe yaunogona kuona mune zvakataurwa uye fomu rekunyoresa (kana usiri ivo vakanyoreswa vashandisi), seinotevera: »
Yakanga iri nguva, a captcha plugin yaidiwa.
Asi, wadii kuisa Google Captcha?
Izvo zvakaoma hahaha
ReCaptcha, semamwe masevhisi eGoogle, kazhinji haawanikwe munyika dzakarambidzwa neUnited States (imwe yacho iCuba).
Ndakanga ndisingazivi izvozvo!
zvakanaka, zvinonyadzisa zvakadii, mumakore mashoma angangove (kana zvakadaro ndinovimba).
Ndine X x shanu = 10. Kana izvi zvaburitswa, handina kuzvimomesa (math dzangu dzakaipisisa kupfuura mashandisiro angu emagetsi.
zvirinyore zviri nyore kupfuura idzo dzakashata RapidShare katsi
RapidShare neakanyanya troll matsi? Ini ndinoda reCaptcha chiuru nguva pamberi paCaptcha fiasco.
Ini handioni dambudziko hombe. Zvirinani haisi imwe yeavo maCaptchas maunofanirwa kunyora zvinoonekwa mune mimwe inosemesa mifananidzo yakashata 😛
Zvinoita kunge zvinoshanda zvakanaka 🙂
Zvinoseka, ini ndanga ndichifunga kugadzira yakafanana system pawebhusaiti yangu nyowani. Ndakazviona muforamu uye / kana blog kunze uko, kunyangwe ivo venyu vanoshandisa WordPress neakafanira plugin yakagadzirirwa zvakanaka vakagadzirisa 😉
Zvingave zvinonakidza kuziva kushanda kwayo mushure memazuva mashoma.
Nekufamba kwenguva, vanozopedzisira vava seGUTL (zero vashandisi vasingazivikanwe, vachivamanikidza kusaina kuti vataure).
Asi ini ndinokuyeuchidza kuti spam inoshungurudza = »)
Hongu, zvakanaka, asi ini handifunge kuti iri blog rinosvika padanho iro GUTL iri (ivo vanokumbira kuti iwe unyoreswe kuti utaure pane chero chinhu).
Neruremekedzo rwese rwakakodzera uye pasina kundikanganisa: Handifunge kuti uri mukana wekutaura pane chimwe chinhu chausinganyatsonzwisisa. GUTL ine zvikonzero zvakawanda uye zvakasiyana zvekutora izvi zviito. 😉
Hazvirevi kuti ini ndinoratidza chero gakava pamusoro pesaiti iyi, uye ini ndataura mune chikamu chemashoko nezve iyo mamiriro uye ini ndinovanzwisisa chaizvo. Kana iwe uchifunga kuti ndairwadziwa nematauriro andakamboita, ndinokumbira ruregerero nemoyo wese sezvo ndanga ndichiedza kuita zvekushamisira.
Na, dzikama. Izvo ndezvekuti kubva kunze zvinogona kuonekwa seyakajeka chiyero, asi kubva mukati mune zvakawanda zvikonzero zvacho 😉
Hongu, zvakanaka. Ini ndanga ndichangobva kuona kuti iyo @Linuxgirl account yainge yabvutwa kuti itsvage muGUTL, uye nekudaro, matanho akaipisisa akatorwa kudzivirira zviitiko zvakadaro.
Uye nenzira, chinhu chinonetesa kuisa makomendi mune zvine mwero, uyezve tarisa kana chirevo chichienzanisirwa chakaitwa netroll uye / kana nemunhu aida kupa maonero avo (vanhu vazhinji vanovhiringidza trolling nechinongedzo yekuona kutendeseka, ndosaka ndinonzwa ndakasununguka neJetpack pane Disqus).
Ngatitsvagei karukureta! Hehe
Nekuisa 5 * 3 = kana chero kumwe kushanda kwe arithmetic mu KDE yekutsvaga bhokisi, ini handina dambudziko kuzviita.
Google inoshandawo se Calculator! = »3
Uye nei wangu UA (Mushandisi Wemushandi) achindiona seIOS kana ndiri paAroid?
Chokwadi, nekuti iyo UA yazvino vhezheni yeiyo Android Webkit muKitKat haina kunyatsogadziriswa.
Dolphin browser <- Ini ndinofunga ndiyo bhurawuza
Ah zvakanaka. Izvi zvinonzwisisika. Ini zvakare ndinoshandisa Dolphin, asi iyo mini.
@Elav wadii kuvhara zvirevo nemushandisi mushandisi? (Iwo maUA akajairika haakwanise kutaura)
Zvingave zvakanaka kana ivo vakaita mashandiro muforamu zvakare, iyo yanga ichiramba ichirwiswa.
Chinhu chakasvetuka iyo catpcha:
Pingback, pingback kwese kwese.
Ini ndinofunga zvakanakisa, iwo mashoma nguva pandinopinda, akachena maChinese makomendi (chaiko) anoonekwa patray.
icho hachisi chinhu chichienzaniswa necaptcha paunenge uchizogadzira fedora account hahaha
Maziso angu…. Vakarwadziwa kunge ndakanamirwa kuma monitor kwemaawa makumi maviri nemana.
Ivo vanofanirwa kuita kunyoresa kweFacebook kune vane usimbe vakaita seni xD
Isu vedu vakanyoreswa hatinetse, saka hazvina basa.
uye ndiani asingade kunyoresa?
Ndinovimba zuva iroro harisvike
haana zita akadaro
«… Tiri kutambira huwandu husingawanzoitika hweSPAM mumablog blog.
Hapana chimwe chiri pablog? Kune zvakare mupengo uyo anonyora muforum muChirungu, French nePutukezi, ndinofunga.
Kana vakandibvunza, ini ndinozviona uye ndobva ndaraira kuti vapatsanure kumeso kweiyo chaiyo cab ...
Izvo zvakare spam.
Panyaya yeblog, izvo zvinoitika kazhinji kana iwe usina Akismet uye / kana Mollom yakaitwa. Ndinokusiya pano skrini yemasamu yakasvika kublog.
Sauro (Crunchyuser) akadaro
Hapana dambudziko 😀
Pindura kuna Sauro (Crunchyuser)
Ini ndaifanira kuchinja password yangu. Haana kundiziva samazuva ese uye haana kunditendera kuti ndipinde. Ipapo ini ndakagadzira kiyi ine mabara epamusoro, ezasi uye manhamba anopfuura gumi mavara (ayo ini ndinogara ndichiita) uye yakandiudza kuti yaive kiyi yakapusa !!! : KANA
Ndakaisa mavara asinganzwisisike mairi uye ichiri kundiudza kuti yaive kiyi ine mwero. Cone! Zvinofanira kunge zvakaoma zvakadii kuti zvive zvakaoma ??? Ndakafunga kuti ine gumi nemashanu mavara, mavara, manhamba uye zviratidzo, zvese zvakafukidzwa. Iwe unofanirwa kuisa isiri-yekudhinda ascii makodhi ??!?! ??